Ugu yaraan lix qof oo lagu dilay qaraxyo ka dhacay Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan lix qof oo lagu dilay qaraxyo ka dhacay Turkiga
August 18, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Qaraxa oo burburiyay xarunta booliiska magaalada Elazig. Sawirka: Reuters.
Ankara-(Puntland Mirror) Ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay ku dhawaad 219 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii labo qarax oo waa-weyn oo loo adeegsaday gaari lala beegsaday saldhigyo booliis oo kuyaala magaalooyiin kala duwan oo Turkiga ah.
Weerarka kowaad ayaa lala beegsaday saldhig booliis oo ku yaala magaalada bariga kutaala ee Van, waxaana ku dhimatay hal sarkaal oo booliis ah iyo labo qof oo shacab ah, ku dhawaad 70 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Saacado kadib, qarax kale ayaa lala beegsaday saldhig booliis oo kuyaala magaalada Elazig, waxaana ku dhimatay ugu yaraan saddex sarkaal oo booliis ah waxaa kale oo ku dhaawacmay 146 qof.
Saraakiisha dowlada Turkiga ayaa ku eedeeyay weeraradaas maleeshiyada Kurdiyiinta ee PKK.
PKK ayaa horey u qaaday weeraro qarax oo is-xigxiga oo ay la beegsaday haayadaha Turkiga.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah yimid magaalada Garoowe, kaasoo noqonaya safarkiisii ugu horeeyay ee Puntland tan iyo markuu qabtay xafiiska. Related PostsNovember 6, 2019 Markab sida xoolo dhan [...]